Nhau - Chiedza simbi villa hunhu uye kuvaka system
Iyo aluminium-zinc alloy dhizaini yealuminium-zinc yakaiswa simbi simbi inoumbwa ne55% aluminium, 43.4% zinc uye 1.6% silicon yakasimbiswa pa600℃. Icho chimiro chose chinogadzirwa nealuminium-iron-silica-zinc, ichiumba dhi-ina-yekristaro, nokudaro ichigadzira dura reyakasimba uye inoshanda chipingamupinyi chekudzivirira kuita ngura kubva pakupinda.
Chiedza chesimbi maficha
1. Corrosion kuramba
Iko kurwisa kwekuora kwe "55% aluminium-zinc coils" kunobva mukudzivirira kwekudzivirira kwealuminium uye kudzivirirwa kwechibayiro kwezinc. Kana zinc ichibayirwa kuchengetedza iyo yakatemwa micheto, kukwenya, uye kukwenya kweiyo kupfeka, aluminium inoumba isina insoluble oxide layer Aluminium-zinc alloy simbi machira akaiswa kune ekunze ekuedzwa bvunzo kweanopfuura makore makumi maviri pasi pemamiriro akasiyana emuchadenga, uye zvakaratidzwa kuti 55% aluminium-zinc alloy simbi machira ane akanakisa ekucheka kudzivirirwa kupfuura kwakakurudzira. uye 5% aluminium-zinc alloy simbi coils.
2. Kupisa kwekupisa:
Iko kupisa kupisa kwe55% aluminium-zinc alloy simbi yeplate iri nani pane iya yeakakurudzira simbi ndiro, uye yakanyanya tembiricha oxidation kuramba kwealuminium yakavezwa simbi ndiro yakafanana.Aluminized zinc chiwanikwa simbi ndiro inogona kushandiswa mune yakanyanya tembiricha nharaunda kusvika ku31 madhigirii.
Iyo 55% aluminium-zinc alloy simbi yeplate ine yakakwira reflectivity, iyo inoita kuti ive isinga pise moto chipinga.Aluminized zinc machira ane angangoita zvakapetwa kaviri iyo yekupisa yekuratidzira yemagalati machira, kuti agone kushandiswa sedenga uye mapaneru asina pendi kuchengetedza simba.
4. Paint chivakwa:
Nekuda kwekunamatira kwakanakisa pakati penzvimbo yezinc uye pendi yealuminized zinc simbi yeplate, inogona kupendwa pasina prereatment uye kurapwa kwemamiriro ekunze kana ichishandiswa sechiratidzo bhodhi kune zvakajairwa zvinangwa. Yakakurudzira simbi jira inoda kurapwa kwemamiriro ekunze uye prereatment.
Chiedza chesimbi villa system mamiriroChiedza chesimbi yemadziro mamiriro, neyakareruka simbi ribbed matanda nemakoramu uye zvinoenderana nechengetedzo dhizaini yeyakajairwa simba, epanyama maitiro ekuratidzira akanakisa, nguva yekuvaka ipfupi, yakanaka kuputira mhedzisiro, rudzi rutsva rwegreen simba kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza chivakwa chimiro system.
1. Basic maitiro
Iyo yekuremerwa-inorema yesimbi simbi chivakwa imba yakajeka, iyo ingori chete 1/5 yeiyo yezvidhina kongiri mamiriro imba uye 1/8 yeiyo yakasimbiswa kongiri chivakwa imba, saka inogona kudzikisira zvakanyanya mutengo wekuvaka hwaro. Hwaro hwechiedza chesimbi chivakwa imba kazhinji inotora strip hwaro.
(1) light simbi mamiriro light uremu, inogona kudzikisa zvakanyanya mutengo weinokosha mainjiniya;
Iyo hunyoro-chiratidzo dhizaini yenheyo inogona kunyatso kudzivirira kupinda kwehunyoro uye gasi dzinokuvadza;
(3)Inonzwisisika anchoring modhi kuti ive nechokwadi chekuvimbika kubatana kwenheyo nemuviri mukuru.
2. Masvingo masisitimu
Iyo yekunze madziro system inowanzo kuve iri pakati pe120-200㎜, Nekuti rusvingo rwakareruka uye rwakaonda, iyo chaiyo nzvimbo yekushandisa yeyakareruka simbi chivakwa imba inowedzera neinenge 10% -15% kupfuura yechinyakare imba, indoor yekushandisa nzvimbo inowedzera neanopfuura 90% kupfuura echinyakare imba, yemukati nzvimbo Mapaipi anogona kurongedzwa mumadziro, pasi uye padenga zvinhu zvakachengeterwa maburi, kuvanda kwakanaka, kwakanyanya kunaka.
(1)Iwo madziro akazadzwa negirazi faibha donje, iyo ine kuita kwakanaka kwekuchengetedza kupisa, kupisa kupisa uye kurira kwekudzivirira;
(2) bepa rekufema harina mvura uye rinofema, rinogona kunyatso gadziridza mwando wemukati, kuita kuti hupenyu huve nyore, uye zvinodzivirira kubereka kweforoma mukati memadziro;
Iyo pombi yakavigwa mumadziro uye haigare yemukati nzvimbo.
3. Floor hurongwa
Iyo yepasi inogadzirwa neepamusoro-simba inopisa-kwakakurisa C-mhando uye U-mhando mwenje simbi nhengo. Matanda epasi akarongedzwa zvinoenderana neyakajairwa modulus uye dzakaenzana nzvimbo mbabvu. Matanda epasi akafukidzwa nemahwendefa echimiro anonyorova-proof uye anticorrosive, achiumba yakasimba seismic pasi system.
(1) Structural ndiro uye pasi simbi danda rakabatanidzwa chimiro, rakasimba uye rakatsiga;
(2) mhando dzese dzemapaipi emvura nemagetsi dzakavanzwa muchimiro chepasi uye hadzigari pakakwirira pechivako;
(3) Iyo girazi fiber fotoni izere mukati meyakajairwa, uye mhedzisiro yekuchengetedza kupisa uye kupisa kupisa, kurira kwezwi uye kuputira kurira kunoshamisa.
4. Roof maitiro
Roof truss inoumbwa nemhando dzakasiyana dzemwenje simbi zvinhu. Kazhinji, kune trangular truss uye T-yakaumbwa truss, iyo inogona nyore uye nenzira inogadzikana kuwana akasiyana siyana akaomarara edenga modelling. Kazhinji, denga rakagadzirwa nematera easphalt ane mavara, ayo ane kugona kuita mvura uye kuratidza kunaka uye mhando.
(1) Denga rinoumbwa rine mashandiro euchapupu hwekunaya, kusagadzikana kwemamiriro ekunze, kuputira kupisa, nezvimwe, izvo zvinogona kuwana hwakasiyana hwakasiyana hwekuteedzera
Kufefetedza kutenderera dhizaini, gara uchichengeta mhepo nyowani.
5. Zvivakwa zvezvivakwa
Zvese zvivakwa zvakagadzirwa nesimba rakasimba simbi simbi yekuve nechokwadi chehupenyu hwebasa remumba.Zvose zvivakwa zvemukati zvinotonhora-zvinomanikidzwa nefekitori chaiyo michina gungano tambo, uye iyo yakatarwa kurongeka ndeye millimeter mita, iyo isingaenzanisike kune zvimwe zvivakwa.